चिनियाँ राष्ट्रपति सी’ले कसलाई भनेका रहेछन् ‘सैतान’ ?
चिनियाँ राष्ट्रपति सी’ले कसलाई भनेका रहेछन् ‘सैतान’ ? चिनियाँको प्रश्न–वुहानमा विश्व सैन्य खेल सुरु भएकै दिन न्योयोर्कमा किन भयो महामारीको पूर्वाभ्यास ?
जनतापाटी डेस्क बिहीबार, चैत ६, २०७६ मा प्रकाशित
काठमाडौं । डिसेम्बर अन्तिम सातादेखि कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिएपछि त्रसित चिनियाँको जनजीवन विस्तारै सामान्य बन्न थालेको छ । थुप्रै प्रान्त र सहरमा कलकारखाना पूर्ववत् सञ्चालन हुन थालेका छन् । किसान र कामकाजीहरु काममा फर्किएका छन् ।
केही प्रान्तमा शिक्षण संस्थामा पठनपाठन हुन थालेको छ भने पर्यटकीय स्थलमा पनि विस्तारै चहलपहल बढेको छ । तर, संकट टरिसकेको छैन । विदेशबाट आएका चिनियाँ, चिनियाँ प्रवासी तथा चिनियाँ मूलका विदेशी कोभिड–१९ बाट संक्रमित भएको पाइएका छन् । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार विदेशबाट आएका १५५ चिनियाँ कोभिड–१९ संक्रमित छन् । बेइजिङ, साङहाई, कान्सु, चच्याङ, क्वाङतोङलगायतका गरी ११ वटा सहर र प्रान्तमा कोभिड–१९ देखिएको छ ।
चीनले सन् २००३ मा सार्स महामारीका बेला निर्माण गरिएको स्याओथाङसान अस्पताल पुनः सञ्चालनमा ल्याएको छ । क्वारेन्टाइनमा राख्नेको संख्या बढ्दै गएपछि अस्पताल पुनः सञ्चालनमा ल्याइएको चिनियाँ अधिकारीहरूले बताएका छन् ।
कोभिड–१९ को केन्द्रबिन्दु मानिएको हुबेई प्रान्तको वुहान सहरमा मार्च ११ देखि संक्रमितको संख्या एक अंकमा झरेको छ । यो प्रान्तका अन्य सहरमा नयाँ संक्रमित नभेटिएको १३ दिन भएको छ । राष्ट्रिय स्वास्थ्य आयोगको तथ्यांक अनुसार चीनमा ८० हजार ८ सय ९४ संक्रमित छन् ।
तीमध्ये ६९ हजार ६ सय १ जना निको भएर घर फर्किसकेका छन् । चीनमा कोरोना भाइरस संक्रमणबाट ३ हजार २ सय ३७ को मृत्यु भएको छ ।
सी’ले कसलाई भनेका रहेछन् सैतान ?
चीनमा कोरोना भाइरसको प्रकोप फैलिँदै गएको बेला राष्ट्रपति सी जिनपिङले एक सम्बोधनमा भनेका थिए, ‘हामीले अनुमान गरे झैँ चीनमाथि ठूलो आक्रमण भएको छ । अब सबै चिनियाँ एक भएर यसविरुद्ध लड्नुपर्छ ।’
त्यो बेला उनले यसो किन भने भन्दै आश्चर्य प्रकट गरिएको थियो । कुरा त्यतिमै सिमित रहेन अहिले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले चिनियाँ भाइरस भन्दै सी’को अनुहारमा हिलो छ्याप्न खोजेजस्तै उनले पनि त्यो बेला कोरोना भाइरसलाई ‘भूत र सैतान’को रूपमा वर्णन गरेका थिए ।
धार्मिक रुपमा कन्फ्यूशियनिस्ट भएका कारण पनि चिनियाँ राष्ट्रपति सी भूतप्रेत वा कुनै अलौकिक शक्तिमाथि विश्वास गर्दैनन् । तर, उनले प्रयोग गरेको शब्द केही समय रहस्यमयी बन्यो ।
जसै चीनको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता झाओ लिजियानले ‘अमेरिकी सेनाले नै वुहानमा महामारी ल्याएको’ भनी किटेरै ट्वीट गरेपछि भने सी’ले प्रयोग गरेको ‘सैतान’ शब्दको अर्थ खुल्यो । चिनियाँ सांस्कृतिमा भूतको अर्थ ‘विदेशी सैतान’ भन्ने लाग्छ । झाओ लिजियानले अक्टोबर २०१९ मा वुहानमा भएका सैन्य अभ्यासहरूमा अमेरिकी सेनाको प्रतिनिधिमण्डल सामेल भएको विषय छुँदै अमेरिकातिर दोष हुत्याएका थिए । अहिलेको समय पश्चिमा मुलुक र युरोपमा वितण्डा गरिरहेको छ कोरोनाले । त्यसको ठूलो मारमा पर्ने मुलुक अमेरिका पनि हो, जहाँ ११३ जनाको मृत्यु भइसकेको छ ।
दोषारोपण त्यतिमै रोकिएन, चिनियाँहरूले यतिसम्म भने कि यो भाइरस पहिले अमेरिकामा फैलिएर पछि मात्र चीनमा आएको हो । चिनियाँ बुझाईमा अमेरिकाले पहिचान गर्नै सकेन र चीनमा आएपछि मात्रै कोरोनाको पहिचान खुल्यो ।
इरान र इटालीमा कोरोना भाइरसको जिनमा देखिएको भिन्नताले भने यस्ता कुरालाई थप बल पुगेको छ । यसबारे चीनका सञ्चार माध्यमहरूले खुला रूपमा प्रश्नहरू सोधिरहेका छन् । उनीहरुले न्यूयोर्कमा भएको इभेन्ट २०१ किन आयोजना गरिएको थियो भन्ने पनि प्रश्न गरिरहेका छन् ।
कुनै कारण विना एक घातक भाइरसको कारण हुने विश्वव्यापी महामारीको लागि त्यो पूर्वाभ्यास किन गरियो ? वुहानमा कोरोना देखिनु भन्दा ठीक एक महिना अघिमात्र यस्तो कार्यक्रमको आयोजना हुनु के संयोग मात्र होला ? अहिले चिनियाँहरु यो प्रश्न सोझ्याइरहेका छन्, अमेरिकातिर ।
कुरा त्यतिमात्र होइन, इभेन्ट २०१ बिल र मेलिंडा गेट्स फाउन्डेसन, विश्व आर्थिक मञ्च (डब्ल्यूईएफ), सीआईए, ब्लूमबर्ग, जोन हप्किन्स फाउन्डेसन र राष्ट्रसङ्घ द्वारा प्रायोजित गरिएको थियो । त्यो कार्यक्रम ठीक त्यही दिन सुरु भयो जुन दिन वुहानमा विश्व सैन्य खेलहरू खेल्न सुरु गरिएको थियो ।
यसका बाबजुद, यो कुरा आधिकारिक रुपमा पुष्टी भइसकेको छैन । यद्यपि, ट्रम्पले ‘चिनियाँ भाइरस’भन्दै ट्वीट गरेसँगै कोभिड–१९ले बायोपोलिटिक्स र जैवीक आतंकबारे गम्भीर प्रश्नहरू खडा गरिसकेको छ ।
एक पटक बेइजिङले कोरोना भाइरसलाई बायो हतियारको आक्रमणको रूपमा पहिचान गरेपछि ‘जनयुद्ध’मार्फत त्यसलाई परास्त गरेको छ । तुरुन्तै बेइजिङ्गले एयर चाइनाको उडानमा २३०० ठूला बक्सहरूसहित इटलीमा सामग्री पठाएको थियो ।
मास्कले भरिएका ती बाकसमा लेखिएको थियो, ‘हामी एकै समुद्रका छालहरू, एउटै रूखका पातहरू र उही बगैँचाबाट फूलहरू ।’ चीनले इरानमा पनि ठूलो मानवीय प्याकेज पठाएको थियो आठवटा उडान मार्फत । र, महत्वपूर्ण त के भने त्यो क्रममा अमेरिकाले इरानलाई लगाएको एकपक्षीय प्रतिबन्धको बेवास्था गरिएको थियो ।
र, सर्बियाली राष्ट्रपति अलेक्सान्डर भिकिकले भनेको कुराले अझ स्पष्ट पार्छ, ‘हामीलाई सहयोग गर्न सक्ने एक मात्र देश चीन हो । अहिले हामीले बुझ्नु पर्छ कि यूरोपीय ऐक्यबद्धता अब अस्तित्वमा छैन । त्यो कागजमा गरिएको एक परिकथा मात्र थियो ।’
यी सबै कुरालाई लिएर मान्छेहरु विश्व राजनीतिमा शक्ति सन्तुलन बदलिएको रुपमा यसलाई अर्थ्याउन थालेका छन् । उनीहरु यो पनि भनिरहेका छन् कि चीनले एक सक्षम राष्ट्रको रूपमा आफूलाई स्थापित गरेको छ भने अमेरिका लगायत शक्तिराष्ट्रले मानवीय संवेदना समेत गुमाएका छन् ।
स्मरणीय के छ भने, दुई वर्ष अघि मात्रै एउटा रेडियो अन्तर्वार्तामा नेपालकै पहिलो फरेन्सिक साइन्टिस्ट स्यामध्वज कार्की (अमेरिकामा बसोबास गरिरहेका)ले ‘अब ‘वार’ अर्थात् युद्ध गर्न न्यूक्लियर र गोलाबारुद आवश्यक पर्दैन । जैविक हतियारले विश्व हल्लाइदिनसक्छ । नेपालमा पनि विभिन्न जैविक झार पाइन्छन्, नेपालले पनि त्यो तयारी गरे हुन्छ’ भनेका थिए । नभन्दै अहिले शक्तिराष्ट्रका नेताहरुले दिएका अभिव्यक्ति र कोरोनाको महामारीले त्यसलाई झण्डै पुष्टि गरिदिएको छ ।
थापा, राणा र लोहनीलाई के दिल्लीले मिलायो ? बुधबार, फागुन २८, २०७६